KABTANKA CUSUB? Leonardo Bonucci oo taageerayaasha si buuxda loogu soo bandhigay + Sawirro & Muuqaal – Gool FM
KABTANKA CUSUB? Leonardo Bonucci oo taageerayaasha si buuxda loogu soo bandhigay + Sawirro & Muuqaal
(Milano) 14 Luulyo 2017 – Kaddib Casa Milan kaddibna uu la kulmay Marco Fassone, Leonardo Bonucci ayaa u gacan haadiyay taageerayaal badan oo dhoobna bannaanka Casa Milan.
Leonardo Bonucci ayaa la sheegayaa inuu noqon doono hogaamiyaha AC Milan isagoo xiran doona kabtanka kooxda marka uu dhamaystiro heshiiska uu kaga yimi Juventus, isagoo booqday Mundo Milan halkaas oo uu ku saxiixay lambarka 6-aad ee Franco Baressi, kabtankii halyeeyga ahaa ee Milan.
Laacibkan oo si lama filaan ah ugusoo wareegey MILAN iyadoo ay shalay uun sheekadu bilaabatay ayaa sanadkii qaadan doona €6.5m, taasoo ka dhigaysa laacibka ugu mushaharka badan Milan, halka Juventus ay qaadatay €40m iyo €2m oo bareemiyo ah.
Sida uu dhigayo Premium Sport, marka laga soo tago kabtanka oo ah meel uu ku habboon yahay maaddaama uu yahay hoggaamiye, wuxuu Bonucci sida lagu wado qaadan doonaa lambarka 19-aad ee Milan kaasoo uu isla Juve u qaadan jirey. Hadda wuxuu u jihaystay dhanka Milanello oo uu ku marayo tijaabada caafimaad qaybta hore ee jireed.
Il boato di Casa Milan all’arrivo di @bonuccileo19 sulla piazza principale 🔴⚫️ (via @antoniovitiello86) #welcomeleo #Bonucci
A post shared by MilanNews.it (@milannewsitofficial) on Jul 14, 2017 at 7:50am PDT
WAAD I GABTAY: Florentino Perez oo aad uga xumaaday tillaabo Barcelona & Verratti khuseeysa oo uu ku dhaqaaqay Ancelotti
DEG DEG: Cengiz Ünder oo soo degey berrina caafimaadka u maraya AS Roma + Sawirro